I-Sirloin steaks ku-pepper sauce namazambane | Ukupheka Kwekhishi
I-Tenderloin steaks ku-pepper sauce
Ama-steaks ahlala eyindlela enhle uma sifuna dla kahle kodwa siyaphuthuma ngoba kulula kakhulu ukuzenza. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi asifuni ukudla ama-bland steaks ngakho-ke sikunikeza umbono wokuhamba nawo nesosi ecebe nopelepele ecebile futhi elula namazambane athosiwe.
Ngakho-ke, namhlanje sikunikeza lezi zibopho ezimnandi zelepelepele ezenziwe ngemizuzu engu-15, noma ngaphansi. Le recipe ihle kakhulu abafundi kanye / noma abodwa Abanawo nomqondo omningi wokupheka futhi abakuthandi nhlobo. Ngakho-ke, bangafunda kancane kancane nangokupheka okulula nokunomsoco.
Ngokuba usoso wepelepele:
200 g wokhilimu wokupheka.
Isipuni esingu-1 sikapelepele omnyama.
2 amathisipuni wepelepele omnyama omnyama.
30 g webhotela.
1 ithebhulethi yomhluzi wenyama egxilile.
2 wezipuni zamafutha omnqumo.
Okokuqala, macerating the ama-steaks. Ukwenza lokhu, sizokubeka endaweni eyisicaba bese siyifaka usawoti ezinhlangothini zombili bese siyihlela kupuleti elijulile esizofafaza ngalo ijusi kalamula. Lokhu kungashintshaniswa nangesiki elisikiwe likagalikhi noma ngazo zombili.
Ngenkathi i-macerating the ama-steaks siyaxebula futhi sigeza i- amazambane. Ngaphezu kwalokho, sizoyisika ibe izingcezu ezincanyana zesitayela sokubhaka bese siyithosa emafutheni amaningi kawoyela ashisayo, bese siyiphunga ephepheni elimunca.
Kamuva, sizokwenza i- steaks ku-griddle noma ipani lokuthosa elishisa kakhulu ukuze zinganciphi ngokugcotshwa uwoyela womnqumo. Sizobaphendukisa nxazonke ukuze bangomi kakhulu.
Ekugcineni, noma ngenkathi kwenziwa, senza i i-pepper sauce elula. Epanini noma epanini lokuthosa sizobeka uwoyela womnqumo kuthi uma ufudumala kancane sifake ibhotela, bese sifaka ama-peppercorns amnyama. Saute kancane ukukhipha ukunambitheka kwawo bese ufaka ukhilimu ukuwupheka imizuzu embalwa. Lapho iqala ukubilisa, engeza ingcosana kasawoti, isitokisi cube nezipuni zikapelepele omnyama omnyama, ukukupheka imizuzu embalwa bese kuyikho lokho. Manje sesingageza ama-steaks namazambane ngale sauce enothile.
Uma ngabe ubufuna okungaphezulu, sincoma ukuthi uzame ifayela le- Ingulube ebhakwe nakho okuhle kakhulu.
Isikhathi sokulungiselela Imizuzu ye-10
Isikhathi sokupheka Imizuzu ye-5
Isikhathi esiphelele Imizuzu ye-15
Ama-Kilocalories ngokusebenza ngakunye 438
Inyama Ungadliwa, Ukupheka Okulula
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » I-Tenderloin steaks ku-pepper sauce
I-Stoplight, ithenda yesinjini egxishiwe